Brutal attacks on Rohingya meant to make their return almost impossible – UN human rights report – CRM
Posted on October 11, 2017 Author swelsone	Comment(0)
UN Human Rights chief Zeid Ra’ad Al Hussein, who has described the Government operations in northern Rakhine State as “a textbook example of ethnic cleansing,” has also urged the Government to immediately end its “cruel” security operation. By denying the Rohingya population their political, civil, economic and cultural rights, including the right to citizenship, he said, the Government’s actions appear to be “a cynical ploy to forcibly transfer large numbers of people without possibility of return.”
Source : http://www.ohchr.org/EN
UN Security Council to meet on Wednesday on Myanmar violence
COX’S BAZAR, Bangladesh: The United Nations Security Council will hold an urgent meeting to discuss violence churning through western Myanmar, after the UN’s rights chief warned that “ethnic cleansing” appeared to have driven over 300,000 Rohingya Muslims from the country. Rakhine State was plunged into crisis after Rohingya militants attacked police posts in late August, […]
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်း ၊ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းလည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူးတားရက်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် အရေးကြီးတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်း သတင်းရေးတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးထောင်ချတယ်ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်း ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး ထောင်ချခံရတာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်းထောက်ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီချမှတ်လိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အမှောင်ကျသွားတဲ့ အခိုက်အခါ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် David Kaye နဲ့ […]
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has written to United Nations Secretary General Antonio Guterres to demand international action to stop rights violations against the Rohingya Muslims in Myanmar. Inaletter addressed to Guterres on Friday, Zarif said the plight of the Rohingya has caused international concern. The ethnic Muslims have not only been […]
US announces Myanmar sanctions over Rohingya violence
Posted on October 24, 2017 Author swelsone